အဘယ်အရာကိုစျေးကွက် equilibrium နှင့်စီးပွားရေးထိရောက်မှုခဲ့သနညျး
ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား၏ Market က equilibrium - ကဘာလဲ?
စီးပွားရေးဧရိယာ၌ဖြစ်ပေါ်သည့်ဖြစ်စဉ်များတစ်ဦးရှင်းပြချက်အဘို့, စည်းမျဉ်းများနှင့်အဥပဒေများကိုနံပါတ်ရှိပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဆက်သွယ်ပါတီများကျေနပ်တစ်သဟဇာတခွအေနအေ - သော့ချက်တစ်ခုမှာထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား၏စျေးကွက် equilibrium ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအယူအဆသင်သည်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုသတိစည်းမျဉ်းလုပ်ခွင့်လက်တွေ့ကျတဲ့တန်ဖိုးကိုရှိပါတယ်။
စျေးကွက် equilibrium ကဘာလဲ?
အဆိုပါစီးပွားရေးစနစ်ကအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေများ၏ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ Market က equilibrium - ကဆုံးမခြင်းမလိုအပ်ပါဘူးပေးသောဿုံမျှမျှတတအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးသူများဟာကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးနှင့်၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုရောင်းသူသူတွေဟာဘဏ္ဍာရေးလိုငွေပြမှုကိုဖွဲ့စည်းစျေးနှုန်းများတက်သွားရန်ကြိုးစားကြဘူးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ထုတ်ကုန်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြားရန်။
ပါဝါထုတ်လုပ်မှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ purchasing ။ Market က equilibrium - ကစီးပွားရေးမှာနှစ်ဦးစလုံးရာထူးရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငြိမ်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေသောသရုပ်ပြ Simulator ကိုသုံးပြီးထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ပထမဦးဆုံးချဉ်းကပ်မှုမှာတော့စျေးကွက် equilibrium တစ်ခုတည်းမှာအကဲဖြတ်သည်, ဒုတိယ option ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးချင်းစီ parameter သည်များ၏ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာနေရည်ရွယ်သည်။
စျေးကွက် equilibrium ၏ Functions များ
အဆိုပါပေးဝေရေးနှင့်ဝယ်လိုအား၏အတိုင်းအတာဖေါ်ပြခြင်း charting ကဆောင်ရွက်အခြေအနေကို visualization ။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနှင့်အတူ, သငျသညျစျေးကွက် equilibrium ၏ချိုးဖောက်မှုတွေ့မြင်နိုင်သည်နှင့်၎င်း၏အကြောင်းတရားများထွက်ရှာရန်။ ချိန်ခွင်လျှာ၏အချက်၏အဓိကလက္ခဏာစျေးနှုန်းဖြစ်လာ, လုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုရှိပါတယ်။
Soizmeritelnaya ။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏တန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေး။ ဒါဟာလိုငွေပြမှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ခြင်း, ပိုလျှံထင်ဟပ်။
ပဲ့ပြင်။ ဒါဟာလွှဲအကြောင်း signal ကိုထုတ်လုပ်သူစျေးကွက် equilibrium ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလို့ငှာကိုတုံ့ပြန်ရမယ်ဖို့ရာလိုအပ်တယ်ပေးသည်။
စိတ်ကြွဆေး။ provider ပိုပြီးအမြတ်အစွန်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားပါတယ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အကြောင်းရင်းများ၏ရလဒ်ထိရောက်စွာခွဲဝေနေကြသည်အဖြစ်အရင်းအမြစ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအများဆုံးအမြတ်အစွန်းဒေသများရှာဖွေနေကြသည်။ စားသုံးသူအကောင်းဆုံးက၎င်း၏ရန်ပုံငွေများကိုဖြုန်းဖို့ကြိုးစားနေတစ်ဦးအနိမ့်သောစျေးနှုန်းရှာကြ၏။
ဖြန့်ဖြူး။ ဒါဟာဝင်ငွေ, အရင်းအမြစ်များနှင့်ကုန်စည်၏နေရာချထားပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
အဘယ်အရာကိုစျေးကွက် equilibrium ခဲ့သနညျး
စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအပေါ် analytical လေ့လာမှုများပြောင်းလဲမှုများများ၏အမြင်အာရုံအမြင်ရိုးရှင်းဖို့ဖော်မြူလာ၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပြည်နယ်နှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။ စျေးကွက် equilibrium ၏အဓိကလက္ခဏာများ:
စျေးကွက် equilibrium အမျိုးအစားများ
သုတေသီများစျေးကွက် equilibrium ၏အကဲဖြတ်နှစ်ခုနည်းလမ်းများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
သင့်လျော်သော Valrasa ။ ဒါဟာအခမဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှု၏အခြေအနေများအတွက်ရောင်းသူနှင့်စားသုံးသူများ၏အပြန်အလှန်ပါဝငျသညျ။ လိုချင်သောအဆင့်အထိပြန်ဆောင်ကြဉ်းကူညီဖို့ရန်ပါတီများတစျဦး၏လုပ်ရပ်များ၏ equilibrium စျေးနှုန်းထွက်ခွာအခါ။ ထုတ်လုပ်သူ - ချို့တဲ့မှာပိုလျှံနှင့်အတူတက်ကြွစွာဝယ်လက်ဖြစ်လာသည်။
မာရှယ်၏ Market က equilibrium မော်ဒယ်။ ဖော်ပြချက်တစ်ခုတိုးချဲ့ကာလယူဆတယ်။ Reliance ကပြီးပြည့်စုံသောမပါလျှင်, ထုတ်လုပ်သူကိုသင် client ကိုပေးဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပမာဏကိုအာရုံစိုက်, အစီအမံ ယူ. , ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုမှာတော့စျေးကွက် equilibrium ၏ယန္တရားသာရောင်းသူစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
Market က equilibrium နှင့်စီးပွားရေးထိရောက်မှု
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းတစ်ခုမှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အထွေထွေဖြစ်ရသောစီးပွားရေး equilibrium ပြဿနာများ၏သီအိုရီအကျိန် ဆို. ပူဇော်သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတစ်ခုတည်းသောစျေးကွက်အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအမှုမှာ, အကောင့်သို့တုံ့ပြန်ချက်သောကပ်လျက်ဒေသများသို့တအခန်းအပေါ်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူမထားဘူး။ စုစုပေါင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်းနှင့်အတူလူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုထဲကအများဆုံးရနိုင်သည့်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပလက်ဖောင်းများအတွက်အနီးကပ်ထိတွေ့စျေးနှုန်းများစဉ်းစားသည်။
အရင်းအမြစ်များအနေနဲ့အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကောင်းစွာဖြန့်ဝေနေကြသည်ကတည်းကဈေးကွက် equilibrium နှင့်ထိရောက်မှု, ခွဲခြား. မရဘဲချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ထုတ်လုပ်သူ "ညစ်ပတ်" နည်းပညာများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲအများဆုံးအမြတ်သူတို့နှင့်အတူသုံးပါ။ ကုန်စည်နှင့်ကုန်သွယ်မှု၏ဖန်တီးမှုမှမဆိုသစ်ကိုချဉ်းကပ်မှုထုတ်လုပ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုအဆိုပါအနိုင်ရမှတိုးမြှင့်မည်မဟုတ်အခါ။
စျေးကွက် equilibrium အောင်မြင်ရန်ရန်နည်းလမ်းများ
ဝယ်လက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူစဉ်ဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်အတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သောအကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေကူညီပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုစျေးကွက် equilibrium တည်တတ်၏ပုံကိုဆန်းစစ်ကြပါစို့။
အချိန်ဒုက္ခအနိုင်ရဖို့ဘယ်လို, ပရမ်းပတာနည်းပညာစီမံခန့်ခွဲမှု - အချိန်များအတွက်ဖိ
Esprit က de Corps
SWOT လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - နေ့စွဲနှင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး၏ထိရောက်သောနည်းလမ်း
ကြက်သွန် "Centurion" - မျိုးစုံ၏ဖော်ပြချက်
ခရစ္စတိုဖာ Haines နှင့်မင်းသမီး Emma Roberts သည်
တိုတောင်းသောစကတ်ကို 2014 ခုနှစ်
Adrien Brody က New York မှာ display ကိုအပေါ်သူ၏ပန်းချီကားများတစ်စီးရီးပေးအပ်
Scott Disik နှင့် Sophia Richie ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ကိုထပ်ပြောက်ခဲ့ကြ
Ugg ဘွတ်ဖိနပ် Adidas
က Nicolas ကေ့၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အပူချိန်မပါဘဲတစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးအတွက်ချောင်းဆိုး - ကုသခြင်းထက်?
တစ်ဦး fluffy စကတ် 2013 နှင့်အတူဝတ်စားဆင်ယင်
နာတာရှည် cholecystitis - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အန္တရာယ်ရှိနာမကျန်းကုသ
ကြီးထွားလာရာသီ - ကဘာလဲ?
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ Kutaby - စာရွက်
အသုံးဝင်သော Linden လက်ဖက်ရည်နှင့်မည်သို့စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နှင့်အခြောက်ထုံးကဘာလဲ?